Kana maal jettuu jarana? OPDOn kun gonkumaa Waa yaaduu dhaabdeeti jechuudha? – Kichuu
Kana maal jettuu jarana? OPDOn kun gonkumaa Waa yaaduu dhaabdeeti jechuudha?
#Walloo #Update: Qeerroo Oromoo weerartoota Polisii naannoo Amaaratin guyyaa harraa wareegaman. Lubbuun keessan boqonnaa bara baraa haa argattu.
Dhiittaa Mirga Namoomaa fi dhumaatii Oromoota Walloo irra Oromummaa isaaniif jechaa Oromoo Walloo irratti raawwatamaa jiru gadi jabeesinee balalefanna. Ummanni Oromoo bal’aan Goola Oromiyaa Cufa Keessatti Mirga Abbaa Biyyummaa Isaa Gonfachuuf wareegama Ol aanaa qaamaa qalbii baaseera; Addatti garuu, Oromoon Walloo Dhiibbaa fi Dhittaa Gabroomsaan Jaarraa Oliif Irra gahaa tureen miidhama hangana hin jedhamne miidhameera.Akka kanaan, Mirga Abbaa biyyummaa fi bilisummaa Oromoo dhugomsuuf wareegamni Oromoon Walloo baasee ol’aanaa dha. Ummata Oromoo walloo kana cinaa dhaabbachuun yeroon amma.
Oromoonni wal jaalanna, waliin dhaabbanna, waliif dhaabbanna, waliif dhaadanna. Waamicha Oromummaa bakka maraa waliif haa goonu waliif haa dhageenyu, waliif haa dirmannu. Iyya Uummata keenya Oromoo Walloo haa dhageeyyu. Oromiyaa guutuu keessatti Dhiittaa Mirga Namoomaa fi dhumaatii Oromoota Walloo irra gahaa jiru haa balaaleeffannu. Haala, yeroo, bakka osoo hin filanne, humna fi sagalee teenya osoo hin qusanne, waan dandeenyuun Oromoota walloo sababaa Oromummaa isaaniitiif jechaa duguuggaan sanyii irratti raawwatamaa jiruuf tokkummaan haa dhaabbannu, haa falmannu, Oromoon haqa ummata isaa fi rakkoo Oromoo bakka adda addaatti argaa jiran kanaaf tokkummaan bakka maratti iyyachuu akka dandeenyuun dhaamsa waliif haa dabarsinuu.
Birhanuu leenjisoo yakkaa fi maqaballeessii hamtuu kan duguuggaa sanyummaatiin adda hintaane oromoo walloo irratti katabe. Lola kana akka inni jedhe oromoon hinjalqabne,Dura dursoo Liyyuu Hayilii Amaaraatu nama nagaa nama sheekaa abbaa amantii rasaasaan magaala axaayyee keessatti rukutee ajjeese.
Dubbii tana akka laaftuutti hinlaallu
Kun Waraana Biyya Eletiryaati. Liyyuu Hayilii Amaaraa waliin Oromoo walloo loluuf dhufeeti Magaala kamiseetti irree qotee bulaatiin ajjeefame.
Waandeemaaru Ofgaafadhu Oromoo
Gootonni Walloo Magaalaa Shawaa Roobit Cabsanii Seenudhaan Reeffa isaanii fudhatanii jiru.
KMN:- Bitootessa 22/2021
Gootonni Walloo Magaalaa Shawaa Roobit Cabsanii Seenudhaan Reeffa isaanii fudhatanii jiru. Dheengadda gaafa Bit. 20/2021 waraana geggeeffamerratti ummata Walloo madaahanii waldhaasaf gara Finfinnee adeemaa turan Finxaaleyyoonni Amaaraa Ambulaansirraa buusanii bifa suukkanneessaa ta’een ajjeesanii turan.
Eeggan Gootonni Walloo gocha kana dhagahanis reefka nama keenyaa fudhannumalee hin deebinu jedhanii imala eegalan wal waraansa cimaa booda magaala Shawaa Roobit Cabsanii seenudhaan reefka nama isaanii fudhatanii jedhame.